धर्तिको स्वर्ग रारामा भारी हिमपात, जाने हैन त हिउँमा रमाउन रारा? | HimalDarpan
धर्तिको स्वर्ग रारामा भारी हिमपात, जाने हैन त हिउँमा रमाउन रारा?
नन्दसिंह रोकाय /हरिकृष्ण ऐडि , मुगु। भारी हिमपात भएपछि हिउँ खेल्न विभिन्न ठाउँका पर्यटक रारामा आउन थालेका छन् । काठमाडौं, बुटवल, विराटनगर, भक्तपुर, पोखरा भैरहवालगायत सहरबाट हिउँ खेल्न रारा आउने पर्यटक बढेका हुन् ।
कहिले निलो, कहिले बैजनी, कहिले सिम्रिक जस्तो अनि कहिले खैरो। रारा तालले मौसम अनुसार दिनमै चार पाँच चोटी रङ्ग र्फछ। त्यहि रङ्गफेर्ने रारातालको पानीको रङ्गमा मिसिन आइपुग्छ सिन्जे र कान्जिरोवा हिमालको छाँया । अनि रारा साँच्चिकै धर्तीको स्वर्ग, स्वर्गको अप्सरा देखिन्छ। रारा वरपर आन्तरिक पर्यटक हिउँमा रमाउने फोटो खिच्ने हिउँसँग लुकामारी गर्ने गरेका छन्। रारा साच्चै धर्तिको स्वर्ग हो रारा तालले दिनमा निकै चोटि रङ्ग फेर्छ।
एक साताअघि रारामा भारी हिमपात भएको थियो । हिमपातका कारण रारा क्षेत्रमा झन्डै एक फिट हिउँ जमेको छ । रारा आएर पहिलोपल्ट हिउँमा रमाएको काठमाडौंका राम महर्जनले बताए। ‘हिउँकै कारण राराताल मनमोहक बनेको छ,’ उनले भने, सेता हिमाल र नीलो ताल चलचित्रमा मात्रै हेरेका थियौं अहिले यहाँ प्रत्यक्ष हेर्दा दिन बितेको पत्तै भएन,’ महर्जनले हिमाल दर्पणसँगको कुराकानीमा बताए। अर्का आन्तरिक पर्यटक दलबहादुर महर्जन पनि रारामा हिउँ खेलेर फर्किएका छन् ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो रारा। रारा राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र पर्ने यो ताल आन्तरिक पर्यटकको प्रमुख रोजाईमा रहेको छ। तर हिउँदको समयमा भने विगतमा रारामा खासै चहल पहल हुने गरेको थिएन। तर गएको वर्षदेखि रारामा हिउँदको समयमा पनि आन्तरिक पर्यटक उल्लेखनीय रूपमा जान थालेका छन्।
ला लिगा: भ्यालेन्सियासँग बराबरीमा रोकियो बार्सिलोना…
युइएफए नेसन्स लिग: स्विट्जरल्यान्डसँग बराबरीमा रोकियो स्पेन…